ပညာရေး အသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ပေးရန် ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ဗကသကျောင်းသားများ တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖေ?? - Yangon Media Group
ပညာရေး အသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ပေးရန် ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ဗကသကျောင်းသားများ တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖေ??
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂
ပညာရေး အသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ပေးရန် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှ မန္တလေး မြို့အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင် တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ် ဖော်မှုကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍ပြုလုပ်ရာ ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများက လာရောက်တား မြစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေကို တိုးမြှင့်ပေးဖို့ ကျောင်းအသီးသီးရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုခေတ်နဲ့အညီပြုပြင်ဖို့ တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ နဲ့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေရေးဆွဲရေးကိစ္စရပ် တွေမှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒ တွေပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျောင်းအသီးသီးမှာ ကျောင်းတွင်းအထွေ ထွေလိုအပ်ချက်တွေ ကျောင်းတွေ အဆောက်အအုံ လုံလောက်မှုမရှိ တာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းနည်းပါးတာ ကျောင်းတွင်းကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကိုပြေလည် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အထိ ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာပါ” ဟု တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကိုရဲမျိုးဆွေက ပြောသည်။
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ပြည် ထောင်စုခန်းမတွင် ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်မှ ၂၁ ရက်ထိ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂများပညာရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ရရှိလာသော ဆွေးနွေးတင် ပြချက်အရ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဥပဒေနှင့်နည်း ပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ၊ ကျောင်းအသီးသီး၏ ကျောင်းတွင်း အထွေထွေလိုအပ်ချက်များစသည့် တောင်းဆိုချက်ပါသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆင့် မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင် အောင်မင်းက ”ကျွန်တော်တို့ ဒီ နေ့ညပိုင်းမှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသွားမှာပါ။ မန္တလေးပါမောက္ခ ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အတူသွားမှာပါ။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုနေရတယ်ဆိုတာ ကို ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ သူတို့ မသိတာလည်းရှိရင်ရှိမှာလေ”ဟု ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသတင်းစာသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကျောင်း သားသမဂ္ဂများ ပညာရေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်းမှ ဗကသသမဂ္ဂများအ ပြင် ဧရာဝတီ၊ ပြည်၊ တောင်ငူ၊ ကလေးစသည့်တစ်နိုင်ငံလုံးမှ ဗကသသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၃ဝ ကျော် တက် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့် ရေး တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ် နေစဉ် ကျောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ လာရောက်တားမြစ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ ဆုံပြောဆိုကြကာ တောင်းဆိုချက်များအား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ရိုက်လာရောက်ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် ရတနာပုံတက္ကသိုလ် လေးထပ်ဆောင်ရှေ့တွင် ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးရန် ကျောင်းသားများ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
တိုက်စစ်မှူး ထပ်ခေါ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဟာဇက် ထင်မြင်